Duufaan: maxaa xigi doona? | Saadaasha Shabakadda
Geed duufaan ku dhacday
Marka a harikeyn ku dhowaad aag dadku ku badan yahay, dhammaan warbaahinta ayaa ku celcelisa wararka. Laakiin maxaa dhacaya marka duufaan? Sidee kuwa ay dhibaatadu saameysey u helaan hab ay ku sii wataan noloshooda? Jawaabahaasi way adag yihiin, laakiin waxaan u dhowaan karnaa iyaga oo isku dayaya inaan kabaha dhigno oo aan ka fikirno sawirro sida kuwa lagu muujiyey maqaalkan.
Waxay leeyihiin a imagen Worth in ka badan kun eray. Hadalkaasi waa run inta badan inta la isticmaalo, laakiin waxaa jira xaalado yar oo ay ku habboon tahay sida ka dambeysa masiibo dabiici ah.
Lamaanayaashu waxay marayaan wado daad qaaday
Mulkiiluhu wuxuu marayaa gurigiisa burburay
Duufaanta Irene ayaa dhoobo ka buuxisay albaabka Hotelka Allegria
Sawirada waxaa isku soo duba riday websaydhada Imtixaan qaadaha waxayna muujinayaan magaalooyin, goobo, jidad iyo dad ka yimid Mareykanka kadib marinka duufaanta. Ulaha jaranjarooyinka iyo geedaha, dhismayaasha burburay ama gebi ahaanba biyo fadhiisteen dadkuna way lumeen ama halgan ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen waddo ay ku sii wataan noloshooda sida ugu dhakhsaha badan ... taasi waa waxa hadhay ka dib marinka duufaanka.
Macluumaad dheeraad ah - Sawirrada daruuraha duufaanka ee Mareykanka
Xigasho - Baaraha
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » Duufaanta kadib: sawiro